Tababare Ancelotti oo sheegay ciyaaryahankii ay isku dheceen oo uu dartiis uga tegay Real Madrid – Gool FM
Miyuu Paul Pogba diyaar u yahay inuu heshiiska u kordhiyo Kooxdiisa Manchester United?
Man United, Arsenal, Chelsea, Juventus & Guud ahaan kulammada maanta iyo caawa laga ciyaari doono horyaallada waa weyn ee Yurub
Horudhac: Chelsea vs Watford… (Macallinka Blues ee Frank Lampard oo uu gaar u yahay kulankan)
Horudhac: Wolverhampton Wanderers vs Arsenal… (Gunners oo booqanaysa garoonka Molineux si ay u nooleyso rajadeeda tartammada Yurub)
Horudhac: Manchester United vs Bournemouth… (Red Devils oo soo dhoweynaysa galabta Kooxda ku jirta kaalimaha looga laabto horyaalka)
DAAWO: Goolasha u sharraxan abaal-marinta goolkii ugu quruxda badnaa bishii June ee horyaalka Premier League oo la shaaciyey
Lampard & Solskjaer oo hoggaaminaya Tababareyaasha u sharraxan abaal-marinta macallinka bisha June ugu fiicnaa Premier League
RASMI: Kooxda Bayern Munich oo xaqiijisay lambarka uu u xiran doono saxiixeeda cusub ee Leroy Sané
Muxuu ka yiri Leroy Sané kaddib markii uu si rasmi ah ugu biiray Kooxda Bayern Munich??
Tababare Ancelotti oo sheegay ciyaaryahankii ay isku dheceen oo uu dartiis uga tegay Real Madrid
Haaruun February 23, 2019
(Napoli) 23 Feb 2019. Tababarihii hore ee kooxda Real Madrid ee waddanka Spain Carlo Ancelotti ayaa daaha ka rogay sababtii dhabta ahayd ee uu uga tegay kooxdaasi.
Ancelotti wuxuu sheegay in uu muran dhex maray isaga iyo Guddoomiyaha Real Madrid Florentino Perez, murankaas oo ku saabsan ‘dabeecadda kibirka badan’ ee ciyaaryahan Gareth Bale, taas oo keenay in uu gebi ahaanba isaga tago naadigaasi 2015-kii.
Laba sanadood oo uu Real Madrid la joogay Ancelotti waxaa uu ka tegay Madrid, xilligaas oo uu Guddoomiye Perez sheegay in go’aankaasi ay qaateen iyagoo u baahnaa in kooxda tababare cusub loo magacaao si ay koobab ugu guuleystaan.
Laakiin 4 sanadood kaddib Ancelotti oo haatan macallin u ah Napoli ayaa sheegay in Real Madrid uu uga tegay kibirka Gareth Bale, waxaana uu yiri “kooxdu waa inay qiiro iyo maseyr leedahay, haddii ay jiraan wax aniga aad iga careysiinaya waa markaan arko qof kibir badan”.
“Mararka uu ciyaaryahanku kubbad u baasi waayo xilli ay baas leedahay oo uu go’aansado inuusan baasin, taasi waxaan u hurayaa mustaqbalkayga” ayuu sii raaciyay tababaraha Talyaaniga ah.
“murankii aniga iyo Perez wuxuu ka dhashay markii aan beddelay Bale ciyaartii Valencia, sababtoo ah kubbad ayuu u baasi waayay Benzema oo dhalin lahaa goolkaas isagoo gool furan ag taagnaa, taas beddelkeeda Bale isagaa laaday darbaddaas” ayuu Ancelotti u sheegay warbaahinta.
“kaddib garoonka ayaan ka saaray Bale halkaas ayaana buuqu ka billowday, inaan arrintaasi sheego waa laga fiican yahay, laakiin haddii Napoli uu ku jiro weeraryahan xoogaa kibir badan waxay noqonaysaa in natiijadeennu yaraato” ayuu laga hayaa Macallinka khabiirka ah.
PSG oo beenisay in ay Agaasimaha Isboortiga u magacaabi doonto macallinkii hore ee Arsenal Wenger
Barcelona oo guul soo labasho leh ka gaartay kooxda Sevilla +Sawiro